TTSweet: ကျွန်မလဲ ဧရာဝတီကို ချစ်သည်
ကျွန်မငယ်စဉ်က အဖေ့အဘွားဆုံးလို့ဆိုကာ အဖေက သူ့တို့ဇာတိ စစ်ကိုင်းသို့ ပြန်မည်ဆိုသည်။ သမီးလိုက်ချင်သလားမေးရာ ဘာရယ်မဟုတ် ကျွန်မလိုက်မည် ခေါင်းအငြိမ့်တွင် အဖေသည် ၅နှစ်သမီး ကျွန်မကို လက်ဆွဲကာ ရထားကြီးစီးလျက် မွေးရပ်မြေသို့ပြန်ခဲ့လေသည်။
ကွန်မတို့ အဘွားအိမ်ရောက်တော့ အသုဘ ကိစ္စများနှင့် လူကြီးများက အလုပ်ရှုပ်နေကြသည်။ အဘွားရက်လည်အပြီး တစ်ရက်တွင် အဘွားသည် ရေချိုးသွားရအောင်ဆိုကာ ဦးလေးစက်ဘီးနောက်မှ ကျွန်မကို လိုက်ခိုင်းသည်။ အဘွားနှင့် အဖေက စက်ဘီးနောက်တစ်စီးနှင့်သွားသည်။ စက်ဘီးသည် ချောင်ကြို ချောင်ကြား လမ်းကျဉ်းလေးများ၊ ချိုင့်ခလုပ်များကို ဖြတ်ကာ သွားရာ ကျွန်မမှာ ပြုတ်ကျမည်စိုး၍ ဦးလေး အင်္ကျီကို တင်းတင်းဆုတ်ထားရသည်။
နောက်ဆုံး မြစ်ဆိပ်ဆိုသည်ကို ရောက်သည်တွင် စက်ဘီးမှအဆင်း နေရောင်အောက်တွင် လက်လက်ထနေသော သဲများကို တွေ့ရာ ကျွန်မ ပထမ အံ့သြသွားသည်။ ဒီလို လက်လက်ထနေသော သဲများ ထူးဆန်းလှပါကလားဟု ကျွန်မတွေးနေမိသည်။ ကမ်းစပ်တွင် သဲသောင်များသာမက ကျောက်တုံးကြီးငယ်များလည်း ကျွန်မ မြင်နေရသည်။ တချို့ ကျောက်တုံးများမှာ လူတွေ အ၀တ်လျှော်ကြလွန်း၍ ပြောင်လက်နေကြသည်။ နောက်တော့ အံ့မခန်း မြစ်ရေပြင်ကျယ်ကြီး၊ မြစ်ထဲတွင်တော့ ရေချိုးသူ၊ ရေကူးသူ၊ ခေါင်းလျှော်သူ၊ အ၀တ်လျှော်သူ လူကြီး၊ လူငယ်၊ ခလေးမိန်းမ စုံလင်လှသည်။ မြစ်ထဲတွင် သစ်ဖောင်၊ ၀ါးဖောင်များလည်း တွေ့ရရာ တစ်ချို့မှာ ဖောင်များပေါ်တွင်ပင်တက်ကာ အ၀တ်လျှော်ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ ခပ်လှမ်းလှမ်းတွင် စစ်ကိုင်းတံတားကိုလည်း လှမ်းမြင်နေရသည်။ လှေငယ်လေးတွေ၊ သမ္ဖာန်တွေ ကူးခတ်နေကြသည်။ မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းက ထုံးဖြူဖြူ စေတီတွေကို လှမ်းမြင်နေရသည်။ ဤမြစ်ကြီးသည်ကား ဧရာဝတီဆိုသည်ကို ကျွန်မမသိသေး။ သို့ပေမဲ့ ကျွန်မ ဒီမြစ်ဆိပ်ကိုလာရတာ ပျော်သည်။ ဤမြစ်ကြီးကို ကြည့်နေရသည့်မြင်ကွင်းကို နှစ်သက်နေမိသည်။
ကျွန်မ စစ်ကိုင်းကို နောက်တစ်ခေါက်ရောက်တော့ အတော်ကြီးပြီ။ မြစ်ဆိပ်မှာ ရေချိုးရင်း ဒီမြစ်ကြီးသည်ကား ငါတို့ ပထ၀ီထဲတွင် သင်ရသော ဧရာဝတီမြစ်ကြီးပါလားဟု သိလာရသည်။ ဤမြစ်ကြီးကိုဖြတ်ကာ သမ္ဖာန်သံ တကျွိကျွိဖြင့် အင်းဝမြို့ဟောင်းကိုလည်း ရောက်ခဲ့သည်။ မယ်နုအုပ်ကျောင်းကိုလည်း လည်ခဲ့သည်။ မြစ်ကြီးသောင်ခုံပေါ်တွင် စိုက်ထားသော ပြောင်းခင်းမှ ပြောင်းဖူးများကို လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ခူးကာ ကြော်စားခဲ့ရာ ထိုပြောင်းဖူးချိုပုံ၊ ဆိမ့်ပုံကား တစ်သက်မမေ့ဖွယ်ရာ။ ဦးလေးသစ်စက်မှာ အလုပ်လုပ်ပြန်တော့ မြစ်ကြီးထဲက သစ်ဖောင်ပေါ်တက်ကာ တာလီခြစ်ဖူးသည်။ လေတဖြူးဖြူးတွင် တာလီခြစ်ရင်းဖြင့် မြစ်ဧရာ၏ လေအေးအေးအရသာကို ခံစားဖူးသည်။ ပုဂံဖက်အလည်ထွက်ပြန်တော့ မြစ်ကိုဇက်ဖြင့်ဖြတ်ကာ တူရွင်းတောင်ပေါ်တက်ဖူးသည်။ မြစ်ကမ်းနံဘေးမှ သဘာဝရှူခင်များကား ပန်းချီကားတစ်ချပ်ကိုကြည့်ရသလို သာယာလှပလွန်းသည်။
ဒီ့ထက်ပိုကြီးလာတော့ မြစ်ကြီး၏ လှပပုံသာမက ဣဒြေ္ဒရပုံ၊ တော်ဝင်ပုံ၊ အသုံးဝင်ပုံ တွေကို သိလာရပြန်သည်။ ဒီဧရာဝတီမြစ်ကြီးဟာ မြန်မာနိူုင်ငံ တောင်နဲ့ မြောက် တနှံ့တလျှား ဖြတ်စီးနေရာ တို့မြန်မာပြည်ရဲ့ အသက်သွေးကြော၊ ဒီမြစ်နှင့် ရင်းနှီး လုပ်ကိုင်စားသောက်သူတွေ အများကြီးပါလားဆိုတာလဲ သိလာရသည်။ ဤမြစ်သာမရှိရင် လယ်သမားကြီးတွေ စပါးစိုက်ဖို့ ဘယ်ကရေရမည်လဲ၊ ဒီမြစ်ကြီးမရှိလျှင် သား၊ငါး ရှာဖမ်းသူတွေ ဘယ်လိုအသက်ရှင်မည်လဲ၊ သားငါးပုဇွန်တွေ ရှားပါးတော့ ဘာတွေ စားသောက်ကြမည်လဲ၊ ဒီမြစ်ကြီးမရှိလျှင်၊ ခရီးလမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် ၀ါးတွေ၊ သစ်တွေ ဘယ်လို သယ်ကြမည်လဲ။ နောက် ကိုယ်သိပ်နားမလည်သည့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိမ်းသိမ်းရေး ကိစ္စတွေ။ ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှု၊ သစ်တော ပြုန်းတီးမှုတွေ ကြုံရမည်။ ယုတ်စွ အဆုံး ဒီမြစ်ကြီးမရှိလျှင် သောက်သုံးဖို့ရေပင် ဘယ်ကရမည်လဲ။ ဤမြစ်ကြီးသည်ကား ငါတို့၏ အသက်၊ သွေး ဆိုသည်ကို နားလည်ခဲ့ပါတော့သည်။
ယခုတော့ ဒီမြစ်ကို ပိတ်ကာ ဆည်ဆောက်ကြမည်တဲ့။ အင်မတန်ကြီးမားသော ဆည်ကြီးတစ်ခု မေခ-မေလိခ ဆုံရာတွင် တရုတ်မှ နည်းပညာယူကာ တရုတ်အလုပ်သမားများဖြင့် ဆောက်မည်။ ရလာသည့် အကျိုးအမြတ် အဖြစ် ရေအားလျှပ်စစ်ကို ခွဲဝေယူကြမည်။ ဆည်ဆောက်သည်ဆိုရာဝယ် ထိုဆည်ထဲ ရေပြည့်ဖို့ ထမဆုံး ရေကို အရင်စုရသည်။ ပထမဆုံးအနေနှင့် ထိုရေတွေစုဖို့ပင် မြစ်ဧရာတွင် ယခင်ကလောက် ရေစီးမည်မဟုတ်တော့။ လျှပ်စစ်အားထုတ်နေစဉ်လည်း ရေကို လျှပ်စစ်ရဖို့ လည်ပြီးကာမှ ရေလွှဲတံခါးတွေကနေ ထုတ်ပေးမည်။ ဤတွင် ရေထဲမှာနေသော သက်ရှိသတ္တ၀ါ၊ ငါးပုဇွန် စသည်တို့ သေကုန်မည်။ ရေလွှဲတံခါးဖွင့်မှ ရေစီးမည်ဖြစ်ရာ သဘာဝအလျှောက်လည်း မဖြစ်နိူင်တော့။ မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက် ရေစီးရေလာလည်း နည်းသွားနိူင်ပါသည်။
မိုးတွင်းလို တောင်ကျရေအလွန်များပါကလည်း ရေကာတာမနိူုင်၊ ဆည်ကျိုးပါက မြစ်ကြီးနားမြို့အပါအ၀င် အနီးအနား မြို့ရွာတွေ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ရေမြုတ်ကာ လူ့အသက် အိုးအိမ်ပေါင်းများစွာလည်း ဆုံးရှုံးနိူင်ပါသည်။ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် ထိမ်းသိမ်းလာခဲ့သော ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံအလှလည်း ပျက်ရပြီ။ ဤသည်မှာ ကျွန်မဖတ်ဖူးသလောက်၊ သိသလောက်၊ မှတ်မိသလောက် အကျိုးအပြစ်များသာ ရေးခြင်းဖြစ်၍ အခြားအရေးကြီးသော အချက်များစွာ ကျန်ပါသေးသည်။
ထို့ကြောင့် ထိုမြစ်ဆုံဆည်ကြီးဆောက်မည့်ကိစ္စကို အကျိုးထက်၊ အပြစ်က သိသိသာသာ ပိုများနေသည်ကို မြင်သည့် အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များအပါအ၀င်၊ ဧရာဝတီကိုချစ်သော ပြည်သူများက ၀ိုင်း၍ကန့်ကွက်ကြသည်။ စာတန်းတွေ တင်ကြသည်။ စုပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးကာ ကန့်ကွက်ကြသည်။ ကျွန်မလဲ အုပ်တစ်ချပ်၊ သဲတစ်ပွင့်အဖြစ်ပါဝင်ချင်ပါသည်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဧရာဝတီကို ကျန်းမာစေချင်သည်။ တိမ်ကောမပျက်စီးစေချင်။ ယခင်အတိုင်း သဘာဝအတိုင်း စီးမြဲစီးဆင်းစေချင်သည်။
ကျွန်မလဲ ဧရာဝတီကို ချစ်သည်ပဲလေ။ ။
" ဧရာဝတီကို ကယ်တင်ကြပါ "
(ဤပုံများသည် အန်တီဆွိ ပုဂံ တူရွင်းတောင်သွားစဉ်က ရိုက်ကူးခဲ့သော မြစ်ဧရာ အလှပုံများဖြစ်ပါသည်။)
Labels: Tag ... Tag .... Tag ..., ဧရာဝတီ
Cameron September 23, 2011 at 3:06 PM
sosegado September 23, 2011 at 3:09 PM
susu September 23, 2011 at 3:21 PM
seesein September 23, 2011 at 4:00 PM
အမိ ဧရာဝတီ ထာဝရ စီးဆင်းစေဖို့
မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းကို အကြွင်းမဲ့ ကန့်ကွက်ပါတယ်
လှေကလေးကိုလှော်လို့ အမြဲထာဝရ ဘေးမသန်း အေးချမ်းကြပါစေ
အဖြူရောင်နတ်သမီး September 23, 2011 at 4:27 PM
မြသွေးနီ September 23, 2011 at 4:47 PM
ဧရာဝတီကို ကျေးစွပ်နေကြတာ ရင်နာတယ်အစ်မရေ..။
We all Burmese and Myanmar(all kinds of tribes)who lived and live in our country love Ayarwaddy except heartless people.We protest Myitsone dam project.
"SAVE AYARWADDY FOR OUR MOTHERLAND AND NEXT GENERATION.
Yin September 23, 2011 at 5:49 PM
ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းကို အကြွင်းမဲ့ ကန့်ကွက်ခြင်းအား ထပ်ဆင့် ထောက်ခံပါသည်..။
စံပယ်ချို September 23, 2011 at 8:13 PM
TT ဆွိ ရေ...
ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းကို အကြွင်းမဲ့ ကန့်ကွက်ခြင်းကို အားလုံးနဲ့အတူ လက်တွဲပြီး ထပ်ဆင့် ထောက်ခံပါတယ်ရှင်။
mstint September 23, 2011 at 8:55 PM
စံပယ်ပြောသလိုပဲ စွိတီကအရေးအသားကောင်းတယ်း)
မြစ်ဧရာ အခက်အခဲများ ကျော်လွှားနိုင်ပြီး ထာဝရအေးချမ်းစွာ စီးဆင်းနိုင်ပါစေ။
မေသိမ့်သိမ့် ကျော် September 24, 2011 at 12:49 AM
ချစ်ရတဲ့ ဧရာဝတီ ရေရှည်တည်ပါစေသောဝ်...။
Anonymous September 24, 2011 at 1:47 AM
သူဟာ ငါတို့သမိုင်းရဲ့ လှို့ဝှက်ချက်တို့ သိမ်းဆည်းထား ဧရာဝတီ။ ဒီပိုစ့်လေးအတွက် ကျေးဇူးတင်မိပါတယ် တီတီဆွိရေ............။
naychisunshine September 24, 2011 at 2:06 AM
Aunty Sweet gmail ရှိရင်ပေးပါနော်
သဒ္ဓါလှိုင်း September 24, 2011 at 3:19 AM
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းကို လုံးဝ ကန့်ကွက်ပါတယ်။ ဧရာဝတီမြစ်ကြီး သဘာဝအတိုင်း ဆက်လက်စီးဆင်းနေပါစေ။
T T Sweet September 24, 2011 at 3:34 AM
နေခြည် ဟိုဖက်မှာလဲ ပေးထားပါတယ်။